मनोनयन दर्ताका रोचक दृश्य !
Published on November 2, 2017 in नेपाली by Nepali Sajha
१६ कात्तिक, काठमाडौं । आगामी मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको आम चुनावका लागि आज ४५ जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालदेखि लिएर सामान्य नेता कार्यकर्ताले समेत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आकांक्षा प्रकट गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म देशैभरि शान्तिपूर्ण रुपमा मनोनयन दर्ता भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा असन्तुष्ट पक्षले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् ।
उम्मेदवारी दर्ताको माहौलले एउटा राष्ट्रिय पर्वकै जस्तो संकेत दिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी अाेलीले बिराटनगर विमानस्थल पुगेर सयपत्रीकाे माला लगाए । अनि झापा पुगेर क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवारी दर्ता गराए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा अापफू नगर्इ वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गरे ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त मनोनयन दर्ताका केही रमाइला दृश्य यस्ता छन्-
मनोनयन दर्ता गर्न एमाले अध्यक्ष केपी अोली विराटनगर हुँदै झापा पुगे ।
चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार प्रचण्ड वाम गठबन्धनका अन्य उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डे र कृष्णभक्त पोखरेलसहित मनोनयन दर्ता गर्न जाँदै ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल काठमाडाैं-२ बाट मनोनयन दर्ता गरेपछि कार्यकर्तालार्इ अभिवादन गर्दै । तस्वीर- श्रीधर पाैडेल/अनलाइनखबर
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले इलाममा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडाैं क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार रविन्द्र मिश्र उम्मेदवारी दर्तापछि कार्यकर्ताहरूसँग तस्वीरका लागि पोज दिँदै । तस्वीर- श्रीधर पाैडेल/अनलाइनखबर
काठमाडाैं क्षेत्र नम्बर-४ का उम्मेदवार कांग्रेस नेता गगन थापा मनोनयन गर्दा गर्न निस्कनुअघि सगुन ग्रहण गर्दै
काठमाडाैं-४ बाट गगनका प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धनका डा. राजन भट्टरार्इ मनोनयन दर्ता गराउन राष्ट्रिय सभागृहमा । तस्वीर- श्रीधर पाैडेल/अनलाइनखबर
तनहुँ-१ बाट रामचन्द्र पाैडेलबिरूद्ध बागी उम्मेदवार पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी मनोनयन दर्तापछि ।
ललितपुर १ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट मनोनयन गर्न जाँदै पूर्व डीअार्इजी नवराज सिलवाल । उनी हालै प्रहरीबाट राजीनामा दिएर एमाले प्रवेश गरेका हुन् ।
कैलाली-४ मा बाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएपछि माअोवादी नेता लेखराज भट्ट । तस्वीर- दीपक उपाध्याय/अनलाइनखबर
मोरङ-६ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराएपछि एमाले नेता लालबाबु पण्डित । तस्वीर- ध्रुव भट्टरार्इ/अनलाइनखबर
कैलाली ५ बाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार अारजु राणा देउवा मनोनयन दर्ताका लागि जाँदै ।
Previous Story Previous post: कास्की कांग्रेसका नेताद्वारा बागी उम्मेदवारी दर्ता
Next Story Next post: चन्द्रागिरी केबलकार र टर्किस एयरलाइन्सबीच सम्झौता